मिसकलबाट माया बसेपछि २० वर्षका युवकले ६० वर्षकी महिलासँग बिहे गरे !:: Naya Nepal
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओले को’रो नावि’रुद्धको खोप पत्ता लाग्नुअघि विश्वभर को’रोना सं’क्र मणबाट ज्या’न गु’माउनेको संख्या २० लाख पुग्न सक्ने चे तावनी दिएको छ । डब्ल्यूएचओको आ’पतकालीन सेवा का प्रमुख डा. माइक रायनले सो चेतावनी दिएका हुन् । को’रोना सं’क्रमणबाट जोगिन एकीकृत र प्रभावकारी कद म चाल्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्त्यतिर चीनको वुहानबाट को’रोना भा’इरसको सं’क्रमण फैलिन सुरु गरेको थियो ।
त्यसयता को’रोना सं’क्रमणका कारण विश्वभर झण्डै १० लाख मानिसको ज्या’न गइसकेको छ । यसैगरी को’रोना सं’क्रमण पुष्टि भएकाहरुको संख्या तीन करोड २० लाख भन्दा धेरै छ ।डब्ल्यूएचओको आ’पतकालीन सेवाका प्रमुख डा. माइक रायनले को’रोना म’हामारी रोक्न राम्रो उपचार र प्रभावकारी खोपमात्रै सबथोक नभएको बताए । त्यसका लागि सबै देशका सरकारहरुले को’रोना नियन्त्र णका लागि सम्भव भएसम्मका सबै उपाय क’डाइका साथ अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
यस्तै विश्वमा को’रोना भा’इरस सं’क्रमितको संख्या ३ करोड २७ लाख ५१ हजार ५१ पुगेको छ । बितेको २४ घण्टामा ३ लाख १७ हजार ६४० सं’क्रमित थपिएका छन् । बिहानसम्मको तथ्यांक अनुसार को’रोना सं’क्रमणबाट ज्या’न गु’माउनेको संख्या ९ लाख ९२ हजार ९६८ पुगेको छ । एकैदिन ५ हजार ८०८ सं’क्रमित थपिएका छन् ।
अहिलेसम्म २ करोड ४१ लाख ६७ हजार ४४८ जनाले को’रोनालाई जितेका छन् । विश्वमा ७५ लाख ९० हजार ६३५ जनामा सक्रिय सं’क्रमण छ । सं’क्रमित ६३ हजार ७१७ को अवस्था ग’म्भीर छन् ।
सबैभन्दा धेरै सं’क्रमण फैलिएको अमेरिकामा एकैदिन ५३ हजार ३३२ सं’क्रमित थपिएका छन् । अमेरिकामा को’रोना सं’क्रमितको संख्या ७२ लाख ४३ हजार ३ पुगेको छ । अ हिलेसम्म २ लाख ८ हजार ४४०ले ज्या’न गु’माएका छन् । त्यस्तै भारतमा एकैदिन ८५ हजार ४६८ जनामा सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । दोस्रो धेरै सं’क्रमित भारतमा अहिलेसम्म ५९ लाख १ हजार ५७१ पुगेको छ।
फेरि २५ दिन सम्पुर्ण बजार,यातायात बन्द रहने गरि लकडाउन गरिने, भर्खरै भयो यस्तो निर्णय !
उनले कोभिड–१९ को खोप विश्वमा बनेर परीक्षणको क्रममा रहेको भन्दै खोपको सफल परीक्षणपश्चात नेपालमा समेत ल्याइने जानकारी दिए। यस्तै मन्त्रालयले सोह्र श्राद्ध भर्चुअल विधिबाट गर्नसमेत आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विगत २४ घण्टामा एक हजार १२० जनामा देखिएको छ। अहिलेसम्म नेपालमा ४१ हजार ६४९ जना कोभिड–१९ को सङ्क्रमण देखिएको छ। आजै १ हजार ११२ जना निको भएका छन्। अहिलेसम्म २३ हजार २९० जना निको भएर घर फर्किएका छन्।